Ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny Photoshop | Creatives Online
Photoshop dia iray amin'ireo programa fanovana sary malaza indrindra ho an'ny mpamorona rehetra. Na izany aza, ho an'ireo vao manomboka dia mety ho olana ny fahazoana azy 100% ary maro kokoa ny manao tetikasa tsotra, na amin'ny sehatra manokana na matihanina. Izany no antony itadiavana azy ireo matetika fampianarana momba ny fomba fanaovana logo amin'ny Photoshop, ny fomba hanovana ny loko fototra amin'ny sary, sns.
Amin'ity indray mitoraka ity dia te-hanome anao loharanon-dahatsary vitsivitsy izahay hanaovana logo amin'ny Photoshop ary koa ny dingana tsy maintsy ataonao mba hamoronana iray tsotra. Ho hitanao fa mora izany!
1 Lafiny manan-danja izay tsy maintsy raisinao mba hamoronana logo amin'ny Photoshop
1.1 Fantaro ny Photoshop
2 Video tutorial hanaovana logo amin'ny Photoshop
3 Ny dingana hanaovana logo amin'ny Photoshop
Lafiny manan-danja izay tsy maintsy raisinao mba hamoronana logo amin'ny Photoshop
Raha efa nanolo-kevitra ny hanao logo amin'ny Photoshop ianao alohan'ny hidiranao ao, dia misy zavatra tokony hodinihinao satria tsy vitan'ny hoe hamonjy fotoana ianao fa hamela anao hanao izany haingana kokoa raha manana ny zava-drehetra ianao. mila azy. Amin'ny ankapobeny, ny heverintsika fa manan-danja indrindra dia:
Fantaro ny Photoshop
Tena ilaina izany mahafantatra ny fomba fampiasana Photoshop hamorona logo. Tsy midika akory izany fa tsy afaka mamorona azy ianao raha tsy fantatrao (satria misy fampianarana maro ary azonao atao ny manaraka azy ireo amin'ny taratasy (sy ny maso)). Ny olana dia, raha te hanatratra zavatra hafa ianao, na hanatsara ny famolavolana, amin'ny tsy fahafantarana ny fitaovana, dia mety ho voafetra ianao.
Ka raha azo atao dia mandany fotoana kely hijerena horonantsary fototra momba ny fiasan'ny Photoshop. Na mamaky torolalana hahitanao izay azonao atao amin'ny programa.
Ny endritsoratra dia ampahany manan-danja iray hafa, saingy tsy dia be loatra. Ary izany ve indraindray ny logo dia sary fotsinyTsy manana taratasy izy ireo, ka tsy ilaina ny miasa amin'io olana io.
Indraindray ny logo dia teny, na andian-teny. Ary eto ny karazana endri-tsoratra hampiasainao dia tena zava-dehibe. Ny soso-kevitray dia ny hanokafana antontan-taratasy Word ianao ary hizaha toetra io teny na teny io amin'ny endritsoratra samihafa. Dia ho hitanao hoe iza no tsara indrindra. Mazava ho azy fa amin'ny Photoshop dia hanana ny vokatra farany ianao ary mety hiova kely izany, ka rehefa vita ny logo dia mety hiova.
toerana misy anao, ny loharano entin'ny solosaina ho antsika no fototra indrindra; Saingy misy tranonkala endri-tsoratra maimaim-poana (sy karamaina) izay mety ho tsara ho anao. Tsy maintsy misintona azy ireo fotsiny ianao ary mametraka azy ireo amin'ny solosainao. Raha tsy hita ao amin'ny Word izy ireo dia andramo hanidy ny programa na programa ary sokafy indray (voavaha izany).
Hevi-dehibe iray hafa hanaovana logo amin'ny Photoshop dia ny sary. Mety ho ianao no namorona azy io hatramin'ny voalohany, na mampiasa sarin'ny orinasa ianao, na mieritreritra ny hamorona azy io amin'ny alàlan'ny programa.
Ny mazava dia hoe, raha hampiasa sary ianao dia tsy maintsy manana kalitao tsara mba tsy ho very ianao rehefa miasa aminy. Raha izany dia, manandrama manana 300 dpi farafahakeliny (izay no manamarika ny kalitao avo lenta ary hisorohana ny pixelation).
Ity dia ampahany azo atao, saingy nihevitra izahay fa tokony hanao izany ianao satria indraindray Ny fanaovana sary amin'ny tanana na ny fieritreretana safidy azo atao ho an'ny mpanjifa dia afaka manampy anao hahafantatra ny fomba hisintonana ny maha-zava-dehibe ny orinasa na ny olona anaovanao ny logo.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, andramo mamorona endrika logo samihafa mba hampiaina azy ireo amin'ny Photoshop. Ho foana ny sasany, satria harianao, na dia tsy mbola tapitrao aza; ny hafa dia hanampy anao hamorona endrika tany am-boalohany kokoa; ary ny hafa dia ho dika mitovy amin'ny sketsa nataonao. Fa ireo rehetra ireo dia hanampy anao hampiseho azy ireo amin'ny mpanjifa ary hanapa-kevitra izay tiany indrindra.
Te-hilaza aminao ny vokany izahay ho teboka iray hafa tokony hodinihina amin'ny fanaovana logo amin'ny Photoshop. Izy io dia ahitana ny fampiharana ny endrika samihafa amin'ny jiro, ny fiaviana, ny fifanoherana, sns. hamadika ny sary tany am-boalohany.
Afaka manampy anao ny horonan-tsary na fampianarana sasany.
Video tutorial hanaovana logo amin'ny Photoshop
Ny fanaovana logo amin'ny Photoshop dia tsy zavatra "vaovao". Raha ny zava-misy dia maro ireo mampiasa azy io ary manao logos maro, ary mampakatra ny zavatra noforoniny amin'ny Internet mihitsy aza. Ny sasany amin'ny vokatra farany ihany fa ny hafa kosa manao horonan-tsary mampiasa fampianarana hanazavana ny zavatra nataony.
Ary te hanome anao ny sasany izahay ohatra amin'ny fampianarana azonao raisina tohizo, indrindra raha tsy manana traikefa be amin'ny programa ianao na te handika ny vokany.
Amin'ity tranga ity, ary tsy misy sketch be dia azonao atao ny manaraka ny dingana voalaza eto mba hamoronana logo matihanina nefa tsy mila fahalalana betsaka.
Ity logo ity dia tonga lafatra ampiasaina amin'ny toerana maro, avy amin'ny tambajotra sosialy, tranokala, karatra fandraharahana, sns.
Te hanana logo karazana galaxy ve ianao? Eto ianao dia manana tutorial Photoshop hamorona logo tena mahaliana sy manaitra.
Ny dingana hanaovana logo amin'ny Photoshop
Farany, ary raha tsy te hahita horonan-tsary ianao dia afaka mahita ny dingana ho an'ny logo fototra kokoa. Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany tokony hatao dia sokafy ny Photoshop ary, ao anatiny, misy antontan-taratasy vaovao.
Manoro hevitra anao izahay hametraka azy miaraka amin'ny lamosina mangarahara mba hahafahanao mametraka azy na aiza na aiza tsy mila manahy momba ny loko mitambatra (ankoatra ny logo, mazava ho azy).
Rehefa manana ny "board" izay hiasanao ianao dia tsy maintsy ampio ny sary na ny teny na teny izay ho anisan'ny logo. Eto ianao dia tsy maintsy manao ny majika mba hanambatra ny zava-drehetra ary hahazoana vokatra tsara. Mazava ho azy, manandrama mamorona sosona samihafa satria amin'ity fomba ity dia afaka miverina ianao ary mamafa tsy mila very ny dingana nataonao.
Farany, afaka mihatra ianao Ny fiantraikany amin'ny logo, tsara amin'ny jiro, mifanohitra, famirapiratana, satin, sns. izany dia hanampy amin'ny famitana azy ho matihanina kokoa.
Vonona? Eny ary, tehirizo ny logo (manoro hevitra anao izahay hanao izany amin'ny endrika psd (raha te-hanavao azy ianao any aoriana) ary amin'ny gif na png mba hitazonana ny sosona mangarahara).
Afaka manome torohevitra anay ve ianao amin'ny fanaovana logo amin'ny Photoshop?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny Photoshop
Logos marika malaza: tantara sy dikany
Taratasy fanoratana taloha